တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ခဏ နှုတ်ဆက်ပါတယ်…
Posted by မေဓာဝီ at 11:17 PM
မမေ စာတွေပြန်ရေးလို့ ၀မ်းသာရတာမှ မကြာသေးဘူး အခုလို ခဏနားရဦးမယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပြန်လာမယ့်နေ့ ကို မျှော်နေပါ့မယ်။
စိတ်မကောင်းဘူး မမေရေ။ စာမေးပွဲရှိလို့ စာမရေးဖြစ်တာ ထင်နေတာ။ အမြန်ဆုံး ပြန်ရေးနိုင်ပါစေ မမေ။
1/23/2008 3:57 AM
I think you're in UK. So, how come your parents can control your use of email and mobile phone? I've come across your blog only two weeks ago and I've been enjoying myself reading your old posts. I was surprised when I didn't find any comments regarding our "saffron revolution". Only now I realize you'd been gagged by your family. Is it because you're connected to the generals? Or are your parents worried about your safety?
1/23/2008 4:34 AM
မေရယ်...တို့က စာမေးပွဲများ ဖြေနေရလားလို့။ မနက်ရုံးရောက်တာနဲ့ မေ့Blogနဲ့ နိဒါန်းစတာမို့ postအသစ်လေးတွေ မတွေ့ရတိုင်း ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာနဲ့...။ မိဘတွေနဲ့ နားလည်မှူ အမြန်ဆုံးရပါစေလို့။ အရမ်းလွမ်းနေမယ်။ Take Care မေ။
မမေ --- ပို့ စ် ကို ဖတ်ပြီး လွမ်းသွားတာဘဲ ။
it's so rubbish... so bureaucrat...
email me how can i contact u...
let's find solution together for some problem... :(
မကြာခင်စာအမြန် ပြန်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Buddha Bless u always!
I think your parents are not wrong in doing so. I myself haveayounger brother whom I am supporting the education and so I prefer him not to spend time on those blogs. Blogs are fine, if you use asatool to express your feeling, improve your writing (both English and Burmese), polish style, etc.. But to waste time in blogging is something parents or guardians would found it offensive.
လွမ်းလွန်းလို့ အိပ်ယာပေါ် ဂျွမ်းပစ် ပစ်ထိုးနေမိတယ်ဗျာ။ ဟဲ
မမေ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ. ခု လို စာရေးတာကို ရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မလိုလားပါဘူး။ မကြာခင်မှာ ကိုယ်တိုင် ရပ်တည်နိုင်မည့် သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
မမေ မိဘတွေကိုလည်း ဥပမာ စာသားလေး လက်ဆောင်ပေးပို့ချင်ပါတယ် ..
မိဘတွေက ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါတဲ့ လူငယ်တွေကို ဟန့်တားနေကြတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်၊ မဟန့်တားကြပါနဲ့၊ ကိုယ်ကြောက်လို့ ကိုယ့်သားသမီးတွေပါ ကြောက်ဖို့ သင်ပေးတယ်ဆိုရင် သိပ်ပြီးဆိုးတာပေါ့၊
(အဖွဲ့ချုပ်ရုံး။ ဟိုပုံး ၁၂-၂-၈၉)
I am sorry to hear that. I like your blog.I'll be waiting........
1/26/2008 10:46 PM
ပျောက်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး။ ပြန်လာလို့ ရမဲ့နေ့ မျှော်
နေမယ်နော်။ အိမ်နဲ့ သေချာညှိကြည့်ပါအုန်း။ လွမ်းနေမယ် မမေရေ
1/27/2008 2:30 AM
ချက်ထားတဲ့ဆွမ်းတွေက တော်တော်ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ ဦးဇင်းတို့တော်ဘုဉ်းချင်လာပြီ။ ကဲကဲကြုံရင်လာလည်ပါအုံး။ http://ashinmettacara-eng.blogspot.com/
I am sorry to hear this. You areagood writer. Time is precious and blogging is addictive.
I only do it asaduty for my country and also because I am notastudent and I do not work.
For young students and workers they should be disciplined.
Thus I have to agree with your family.
ကြည့်စမ်း….တိုင်းပြည်မလွတ်လပ်ရင် ဘယ်လောက်နစ်နာသလဲဆိုတာ အခု လက်တွေ့ဘဲ။ စာရေးကောင်းတဲ့လူတယောက် သူ့ရဲ့ တောက်ပြောင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်မရရှာဘူး။ လွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ ဘယ်မိဘက အလကားနေ ရင်း ကိုယ့်သားသမီးထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို ပိတ်ပင်ပါ့မလဲ။
သည်တော့ လူတွေ သူစိတ်ပါဝင်စားရာ၊ အားသန်ရာ (Pursuit of Happiness) ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို မရောက်ရောက်အောင် ကျနော်တို့အားလုံး ဖန်တီးပေးကြရမယ်။ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ဘို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းကြရအောင်။
2/01/2008 4:04 AM
သဲလည်း မအားတာနဲ့ မလာဖြစ်လို့ အခုမှပဲ သိတော့တယ်။ မြန်မြန်အဆင်ပြေပါစေ အမ။
မမေက တကယ်ပဲဗျာ. လုံးဝတောင် ပြန်မလာတော့ဘူး။း(
I donot understand your situation why your parents block your doing bloggers. Do they afraid of military gov?
You web is nice to see your feeling and some informations that people may interested.
စောင့်မျှော်လျှက်ပါ အစ်မ :)
i support ur blog just like many other MEs.
Make my wordacrime
I will cry out louder
Make my voiceacrime
I will findanew place to hide
Tens will rise to take my place
I and my kind are forever.